February 11, 2018 Internet Khabar
– एक मुट्ठी ओखर लिनुहोस् र यसलाई डढाउनुहोस् ।
– ओखर डढेर जम्मा भएको खरानीलाई एउटा कचौरामा राख्नुहोस् ।
– अव कचौरामा केहीमात्रा पानी मिसाउनुहोस् र मीश्रणलाई १२ घण्टा सम्म छोडी दिनुहोस् । अव ओखती तयार भयो ।
– कचौरामा भएको ओखती (मीश्रण) लाई आफुले हटाउन चाहेको रौं को वरिपरी दल्नुहोस् ।
– यो प्रक्रिया दिनको २ पटक दोहोर्याउनुहोस् र शरीरमा दलेको ओखतीलाई करिव आधा घण्टा जति राख्नुहोस् र सफा पानिले पखाल्नुहोस् । केही हप्तामै तपाईको अनुहार तथा शरीरमा भएको अनावश्यक रौं हराएर जानेछ ।
– २ कप चिनि
– आधा कप कागतीको रस
– आधा कप पानीलाई मिसाएर मीश्रण बनाउनुहोस् ।
– एक इन्च कपास काट्नुहोस् ।
– मीश्रणलाई चिसो हुन दिनुहोस् जसका कारण तपाईको औला पोलिने छैन ।
– अव मीश्रणलाई चाहेको स्थानमा दल्नुहोस् । केही मिनेट सम्म त्यसै छाडिदिनुहोस् र अनि मीश्रणलाई बिस्तारै बिस्तारै उक्काउनुहोस् । त्यस पछि पखाल्नुहोस् ।
गर्भावस्थामा यौन सम्पर्क राख्न हुन्छ कि हुँदैन ? जानिराखौं !
February 25, 2017 October 17, 2018